basic of C# (part 6) | our notes for our youngers
basic of C# (part 6)
Filed under: Basic of C# — Tags: .NET, C#, programming — sevenlamp @ 3:49 PM
Data Type တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် သိထားစရာလေးတွေ ပြောချင်သေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ C# ထဲမှာ3လို့ ရိုက်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ3ရဲ့ datatype က default အနေနဲ့ integer type ဗျ။ ကျွန်တော်က long အဖြစ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင် 3L လို့ ရေးရမယ်။ ကျန်တာတွေကို အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
3 => int
3L => long
3.0 or 3.0D => double
3.0F => float
3.0M => decimal
‘3’ => char
“3” => string
အပေါ်မှာ ပြထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ့် value က3ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ကို data type အမျိုးမျိုးမှာ ရေးတဲ့ပုံစံလေးပါ။
အဲ့ဒီထဲမှာ string type ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ type တွေက numeric type တွေပါ။ ဆိုလိုတာက သူတို့ကို ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား လုပ်လို့ရတယ်။ string type ကိုတော့ မရဘူး။
string v1 = “3”;
string v2 = “4”;
ဆိုရင် output က 34 ဆိုပြီး ပြနေလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ3နဲ့4ကို number အနေနဲ့ မပေါင်းပဲ string အနေနဲ့ ပေါင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က string type အနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ value တွေကို ပေါင်းချင်တဲ့ အခါမှာ numeric type အဖြစ်ကို ပြောင်းဖို့လိုလာပြီပေါ့။ ဒီလိုမျိုး datatype တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် Data Type Conversation အကြောင်းကို သိဖို့လိုလာပါပြီ။ အဲ့ဒီလို ပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ numeric type အချင်းချင်း ပြောင်းတာနဲ့ numeric type နဲ့ string type ပြောင်းတာ ဆိုပြီး ခွဲပြောပါမယ်။
numeric type အချင်းချင်း ပြောင်းမယ်ဆိုရင် type conversation မှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ငယ်တဲ့ type ကနေ ကြီးတဲ့ type ကို ပြောင်းတာ (Widening) နဲ့ ကြီးတဲ့ type ကနေ ငယ်တဲ့ type ကို ပြောင်းတာ (Narrowing) ဆိုပြီး ရှိတယ်ဗျ။ ဥပမာ int data type ကနေ long ကို ပြောင်းချင်ရင် widening , long ကနေ int ကို ပြောင်းချင်ရင်တော့ narrowing ပေါ့။
int int_var1 = 123;
long long_var1 = int_var1; // implicit conversation (widening)
long long_var2 = (long) int_var1; // explicit conversation (widening)
int int_var2 = (int) long_var1; // explicit conversation (narrowing)
*** narrowing မှာ implicit မရှိပါဘူး ***
object data type ကနေ numeric type ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်….
object o = i; // implicit boxing
object o = (object) i; // explicit boxing
int i = (int) o; // unboxing
string type ကနေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလို type casts လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ? Convert Function တွေကိုသုံးပြီးတော့ ပြောင်းရပါမယ်။ FCL ထဲက Convert class ထဲမှာ data type တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ function တွေရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Data type class တွေထဲမှာလဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ function တွေနဲ့ ပြောင်းရပါမယ်။ အောက်မှာ နမူနာကြည့်ပါ။
string st = “123”;
int i = Convert.ToInt32(st);
int i = Int32.Parse(st);
string st = Convert.ToString(i);
အိုကေ.. ဒါဆိုရင် C# မှာ data type တွေ တခုကနေ တခုကို ပြောင်းတာ ပြောင်းတက်မယ်နော်။